VirtualBox 6.1.32 पहिले नै जारी गरिएको छ र 18 त्रुटिहरू समाधान गर्दै आइपुगेको छ | ubunlog
VirtualBox 6.1.32 पहिले नै जारी गरिएको छ र 18 त्रुटिहरू समाधान गर्दै आइपुगेको छ
विकास को धेरै हप्ता पछि ओरेकलले भर्खरै जारी गरेको घोषणा गर्‍यो को नयाँ सुधारात्मक संस्करण "VirtualBox 6.1.32" जसमा उसले 18 बग फिक्सहरू भएको कुरा औंल्याए।
जो भर्चुअलबक्ससँग अपरिचित छन्, म तपाईंलाई भन्न सक्छु यो एक बहु प्लेटफर्म भर्चुअलाइजेशन उपकरण हो, यसले हामीलाई भर्चुअल डिस्क ड्राइभहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ जहाँ हामी सामान्यतया प्रयोग गर्ने एक भित्रमा अपरेटिंग प्रणाली स्थापना गर्न सक्दछौं।
1 प्रमुख भर्चुअलबक्स ६.१.३२
2 Ubuntu र डेरिभेटिभहरूमा VirtualBox को प्याच संस्करण कसरी स्थापना गर्ने?
प्रमुख भर्चुअलबक्स ६.१.३२
यो नयाँ संस्करणमा पहुँच समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने लिनक्स होस्ट वातावरणहरूको लागि थपहरू प्रस्तुत गर्दछ USB यन्त्रहरूको निश्चित वर्गहरूमा। हाइपरभाइजरको शीर्षमा चलिरहेको वातावरणको लागि हाइपर-V, RAM व्यवस्थापन सबसिस्टम अनुकूलता सुधार गरिएको छ HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity) संयन्त्रको साथ अतिथि प्रणालीहरू।
को होस्ट वातावरण को लागी थप को भाग मा सोलारिसले स्थापनाकर्तामा बग फिक्स गर्यो जसले सोलारिस १० मा क्र्यास भयो र प्याकेजमा बग पनि फिक्स गरियो (vboxshell.py स्क्रिप्टमा कार्यान्वयन अनुमतिहरू थिएन)।
सच्याउनुपर्ने कुरामा उल्लेख छ दुई स्थानीय कमजोरीहरू तय गरियो: CVE-2022-21394 (6.5 को गम्भीरता 10) र CVE-2022-21295 (गम्भीरता 3.8)। दोस्रो कमजोरी विन्डोज प्लेटफर्ममा मात्र देखिन्छ। समस्याको प्रकृतिबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
ताम्बियन भर्चुअल मेसिन प्रबन्धकमा निश्चित OS/2 स्थिरता समस्याहरू नयाँ AMD प्रोसेसरहरूसँग अतिथि वातावरणमा (OS/2 मा TLB फ्लश सञ्चालनको कमीको कारणले समस्याहरू उत्पन्न भयो)।
को अन्य परिवर्तनहरू जुन बाहिर खडा हुन्छन् यो नयाँ संस्करण को:
पूर्ण स्क्रिन मोडमा मिनीबार प्रयोग गर्दा GUI मा फोकसको इनपुट हानिसँगको समस्या समाधान गरियो।
साउन्ड कार्ड इमुलेशन कोडमा, OSS ब्याकइन्ड सक्षम हुँदा खाली डिबग लग सिर्जना गर्ने समस्या समाधान गरिएको छ।
E1000 नेटवर्क एडाप्टरको इमुलेटरमा, लिनक्स कर्नेलमा लिङ्क स्टेट जानकारीको स्थानान्तरण स्थापना गरिएको छ।
स्वचालित स्थापनाले विन्डोज XP र Windows 10 प्रणालीहरूमा क्र्यास हुने रिग्रेसनलाई ठीक गर्छ।
अतिथिहरूमा पाठ मोडमा गलत माउस कर्सर स्थितिको साथ समस्या समाधान गरियो।
अतिथि नियन्त्रणले युनिकोड ह्यान्डलिङमा सुधार गर्छ र होस्ट वातावरण र अतिथि प्रणाली बीच डाइरेक्टरीहरू प्रतिलिपि गर्ने समस्याहरूको समाधान गर्छ।
साझा क्लिपबोर्डले X11 र Windows-आधारित अतिथि र होस्टहरू बीच HTML सामग्रीको स्थानान्तरणलाई सुधार गरेको छ।
OS/2 का लागि थपहरूले साझा डाइरेक्टरीहरूमा विस्तारित विशेषताहरू सेट गर्न समस्याहरू समाधान गर्दछ
अन्तिम यदि तपाईं यसको बारेमा बढि जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने VirtualBox 6.1.3 को यो प्याच संस्करण को रिलीज को बारे मा, तपाइँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ तलको लिंकमा विवरणहरू.
Ubuntu र डेरिभेटिभहरूमा VirtualBox को प्याच संस्करण कसरी स्थापना गर्ने?
जो पहिले नै VirtualBox प्रयोगकर्ताहरु को लागी र उनीहरु अझै सम्म नयाँ संस्करण को लागी अपडेट गरिएको छैन, उनीहरुलाई थाहा हुनु पर्छ कि उनीहरु मात्र एक टर्मिनल खोल्न र यसमा निम्न आदेश टाइप गरेर अपडेट गर्न सक्छन्:
अब जो अझै पनी प्रयोगकर्ताहरु को लागी छैनन्, तपाइँलाई थाहा हुनु पर्छ कि स्थापना गर्नु अघि, तिनीहरूले हार्डवेयर भर्चुअलाइजेशन सक्षम छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। यदि तिनीहरू एक इंटेल प्रोसेसर प्रयोग गर्दै छन्, तिनीहरूले VT-x वा VT-d सक्षम गर्नुपर्नेछ उनीहरूको कम्प्यूटरको BIOS बाट।
उबुन्टु र डेरिभेटिभको मामलामा, हामीसँग अनुप्रयोग स्थापना गर्न दुई विधिहरू छन् वा जहाँ उपयुक्त हुन्छ, नयाँ संस्करणमा अपडेट गर्नुहोस्।
पहिलो विधि अनुप्रयोगको आधिकारिक वेबसाइटबाट प्रस्ताव गरिएको "डेब" प्याकेज डाउनलोड गरेर हो। लिंक यो हो।
अन्य विधिले प्रणालीमा भण्डारहरू थप्दै छ। आधिकारिक VirtualBox प्याकेज रिपोजिटरी थप्न, तिनीहरूले Ctrl + Alt + T को साथ टर्मिनल खोल्नु पर्छ र निम्न आदेश चलाउनुहोस्:
अब भयो हामीले प्रणालीमा आधिकारिक VirtualBox प्याकेज रिपोजिटरीबाट सार्वजनिक PGP कुञ्जी थप्नु पर्छ।
अन्यथा, हामी आधिकारिक VirtualBox प्याकेज भण्डारको उपयोग गर्न सक्षम छैनौं। आधिकारिक VirtualBox प्याकेज रिपोजिटरीबाट सार्वजनिक PGP कुञ्जी थप्न, निम्न आदेश चलाउनुहोस्:
हामीले निम्न आदेशको साथमा APT प्याकेज भण्डार अपडेट गर्नुपर्दछ।
एक पटक यो सकिएपछि, अब हामी प्रणालीमा VirtualBox स्थापना गर्न अगाडि बढिरहेका छौं।
र यसको साथ तयार छ, हामी हाम्रो प्रणालीमा VirtualBox को नयाँ संस्करण प्रयोग गर्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » सफ्टवेयर » VirtualBox 6.1.32 पहिले नै जारी गरिएको छ र 18 त्रुटिहरू समाधान गर्दै आइपुगेको छ